Mepụta kaadị azụmaahịa mbụ site na iji kaadị azụmaahịa GN | Esi m mac
Mepụta kaadị azụmaahịa mbụ site na iji kaadị azụmaahịa GN
Kaadị azụmahịa bụ ihe dị oke mkpa maka onyonyo nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọkachamara. Ngosipụta dị mfe na-enye gị ohere ịgbasa netwọkụ nke kọntaktị, ndị ahịa, ndị na-eweta ngwaahịa yana yabụ, imepụta na nlekọta a na-ewere mgbe ị na-akwadebe kaadị azụmaahịa dị mkpa.
"GN Business Cards for Pages" abụghị ngwa dị mfe, mana nnukwu nchịkọta ndebiri akpan kere ka eji na Peeji, ndị nchịkọta akụkọ Apple Text. N'ime ngwugwu a, ị ga-ahụ setịpụrụ nke mebere ihe karịrị narị abụọ ndebe mbụ, nwere usoro na ụdị dị iche iches, nke ị nwere ike iji gosipụta ọmarịcha ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ azụmaahịa gị. Nwere ike ịhọrọ n’etiti usoro azụmahịa azụmahịa mara mma ma mara mma, ma ọ bụ họrọ maka ihe dị egwu karị, agba, okike na oge a.
Kaadị azụmahịa GN maka ibe
Dị ọ bụla ị họọrọ maka kaadị azụmaahịa gị, ndebiri nke Graphic Node tinyere n'ime ngwugwu a ga-enyere gị aka ịchọta ụdị na ụdị kacha mma dịka ụlọ ọrụ gị si dị. Na mgbakwunye, ọ bụ dị mfe iji ngwá ọrụ, dị ka ngwa ndị ọzọ anyị gosipụtara gị ugbu a Esi m mac.
All ndebiri bụ ukwuu customizable. Ha niile nwere ihe dị iche iche ị nwere ike hazie dị ka ihe masịrị gị na mkpa gị, na-agbanwe ogo ha, na-agbanwe agba, gbanwee nha na mkpụrụedemede leta ahụ, na-agbakwunye ma ọ bụ wepu igbe ederede, na-ede ederede gị (ma ọ bụ na-agafe ya) aha azụmahịa gị, nkọwa kọntaktị gị ... N'agbanyeghị echiche ọ bụla i bu n'uche, ịnwere ike ịme ya ngwa ngwa na ngwa ngwa, na-enweghị nsogbu.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-emegharị nha ahụ maka usoro ọkọlọtọ, yabụ, ozugbo ịmechara atụmatụ gị, ị ga-ebipụta ha.
"GN Business Cards for Pages" nwere ọnụahịa oge niile karịrị euro iri, mana ugbu a ị nwere ike irite uru site na mbelata 90% wee nweta ya naanị € 1,09 na Mac App Store. Onyinye a na-abia ekele maka mgbasa ozi "Mac App Store Sales" ya mere a ga-ejigide ya dị irè ruo echi, Fraịde n'etiti abalị. Echefula na ị ga-etinye peeji ndị na Mac gị.
GN Business Cards ndebiri10,99
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mepụta kaadị azụmaahịa mbụ site na iji kaadị azụmaahịa GN
Ọtụtụ ndị ọrụ na-akọ banyere njehie firmware mgbe ị na-etinye macOS High Sierra
6 mbido ndọtị ọhụrụ na Photos maka macOS High Sierra